के ओलीकै निरन्तरता चाहन्छ भारत ? यसो भन्छन् विश्लेषक
बाह्रखरी - कुञ्जरमणि भट्टराई बुधबार, वैशाख २९, २०७८
तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ/रासस ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत गुमाएपछि बहुमतको सरकार गठनका लागि दिइएको समयावधि नजिकिँदै छ ।
गएको सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । बिहीबार राति ९ बजेसम्मका लागि बहुमतको सरकार गठनको समायावधि दिइएको छ । प्रतिपक्षी गठबन्धन सरकार गठनको कसरतमा छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का शीर्ष नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । तथापि, उनीहरूले सरकार बन्ने औपचारिक निष्कर्ष भने निकाल्न सकेका छैनन् ।
जसपा एकमत नहुँदा बहुमत सरकार गठन हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गइरहेको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नयाँ सरकारको विपक्षमा रहेको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यसैले विपक्षी गठबन्धनका लागि सरकार गठन गर्न सहज छैन् ।
विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन नसकेर फेरि ठूलो दलको हैसियत (संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि बढ्दो छ । उक्त सम्भावनामा छिमेकी मुलुक भारतले पनि मलजल गरेको चर्चा हुन थालेको छ ।
त्यसो त भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का नेता सुव्रमण्यम स्वामीले मंगलबार नेपालको प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई इच्छाएको भन्दै ट्विट गरेका छन् । उनको ट्विटको विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ ।
त्यस्तै, आज हिन्दुस्तान टाइम्सको सम्पादकीयमा पनि भारतले ओलीलाई नै समर्थन गरेको उल्लेख छ ।
राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन भारतले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहेको जिकिर गर्छन् । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला गतिविधिले भारतलाई सहजता पुर्‍याएका कारण ओलीको पक्षमा देखिएको उनको टिप्पणी छ ।
“सुव्रमण्यम स्वामीदेखि हिन्दुस्तान टाइम्ससम्म हेर्दा भारतले कसको पक्षधरता लिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यो नयाँ कुरा पनि होइन । पछिल्ला तीन वर्षको अवधि विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालका प्रधानमन्त्रीका भनाइ र गराइ र भारतसँगको सम्बन्धले पनि त्यो कुरा स्पष्ट पार्छ,” उनले भने ।
ओलीमार्फत भारतीय राजनीतिक स्वार्थहरू सिद्ध भइरहेको विश्लेषक महर्जनको ठहर छ । ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको धार्मिक ‘उग्रवाद’ पनि एकैखालको भएको उनको ठम्याइ छ ।
“राजनीतिक विचारसँगै जोडिएको धार्मिकता पनि हो । ओलीको र मोदीको धार्मिक विचार–दृष्टिकोणमा खासै अन्तर छैन,” महर्जन भन्छन्, “दुवैले फालेका कार्ड र पछिल्ला चरणमा गरेका कामहरूले उनीहरु एउटै विचारका हुन भन्न सकिन्छ । त्यसले पनि सहकार्य हुन सक्ने देखिन्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कार्यकालमा भारतका केही स्वार्थहरू पूरा भएका कारण पनि ओलीलाई टिकाउने भारतको प्रयत्न हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
“दुई तीन–वर्षको बीचमा भारतीय स्वार्थ पूरा हुँदै गएका छन् । जलस्रोतको मामिलालगायतमा भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ । त्यसले स्पष्ट संकेत दिन खोजेको छ । उसलाई सहज फेरि पनि ओलीमार्फत नै हुनसक्छ । त्यसका लागि कुनै न कुनै हिसाबले सत्तामा टिकाइराख्ने देखिन्छ,” उनी जिकिर गर्छन् ।
भारतले वामपन्थीहरुको फुट चाहेको र त्यो ओलीमार्फत पूरा हुँदै गएको उनको टिप्पणी छ । पछिल्लोपटक विवादग्रस्त नेकपा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्ववत् पार्टीको हैसियतमा फर्र्किएका छन् ।
“वामपन्थीहरुको फुट होस्, ठूलो शक्तिको रुपमा उदय नहोस् भन्ने चाहना पनि ओलीमार्फत नै पूरा भएको छ । उनको दम्भ, अहंकार, एकाधिकारले ठूलो दलको रूपमा उदय हुन खोजेको नेकपा विभाजन भयो । त्यसले भारतलाई केही न केही रुपमा सहयोग नै पुर्‍याएको छ,” उनी भन्छन् ।
महर्जन ओलीलाई राष्ट्रवादको नाममा जनतालाई भ्रमित पार्न सफल पात्रको रूपमा चित्रित गर्छन् । त्यही जगमा भारतको साथ पाएको उनको ठम्याइ छ ।
“राष्टवादको जुन खालको उदय भएको थियो, फेरि पनि सुरुवातमा भारतविरोधीजस्तो देखिएको जुन राष्ट्रवाद थियो, त्यो देखिँदा भारतलाई नै फाइदा हुन्छ । किनभने, भारतविरोधी राष्ट्रवाद जनताको आँखामा नांगियो भने अर्को शक्ति उदय नहोला भन्ने अनुमान पनि हुनसक्छ,” उनको विश्लेषण छ, “भारतले विरोध गर्‍यो भने राष्ट्रवादी हुने भ्रम छ । त्यो राष्ट्रवादको जगमा ओलीको उदय भएको हो । आममान्छेलाई भम्रित पारेर मत लिने सर्वसत्तावादी व्यक्तित्व स्थापित हुँदै गएको छ ।”
भारतविरुद्ध गठबन्धन उभिन नसके फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने उनको निष्कर्ष छ । “अरू दलले के गर्छन्, अहिलेसम्म गठबन्धनको बहुमत पुगेको छैन । जसपाको पनि मत विभाजन त छँदै छ । पार्टी विभाजन हुने तहमा पुगेको छ । यी कुराले ओली नै अर्कोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने आधार बनिरहेको छ । भारतले दलहरूको बीचमा चलखेल गर्ने कुरा त छँदै छ । त्यसको विरुद्धमा अरू दल कसरी खडा हुन्छन् हेर्न बाँकी छ,” उनले निष्कर्ष सुनाए ।
नेकपा (एमाले)को खनाल–नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता युवराज ज्ञवाली पनि नेपालको राजनीतिमा भारतले देखिनेगरी हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको स्वीकार गर्छन् ।
“नेपालको राजनीतिमा भारतको भूमिका निर्णायक बन्दै जान थालेको देखिन्छ । यो संविधान खत्तम नगरेसम्म उनीहरूको मुभ चलिरहन्छ,” उनी भन्छन्, “अहिलेको उपस्थिति त्यसैको संकेत हो ।”
भारतीय पक्षको चाहना छरपस्ट भइसक्दा मुलुकको राजनीति कसरी, कता डोर्‍याउने भनेर यहाँका नेता, नेतृत्वले विवेक पुर्‍याउने बेला आएको उनको भनाइ छ । “यो संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउन सबैले हेक्का राख्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “हामी कम्युनिस्टहरूले हाम्रो आन्दोलन जोगाउन निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ ।”
भारतले नै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सपोर्ट गरिरहेको भन्ने विषयमा विमति राख्छन्, अर्का विश्लेषक सीके लाल । भारतले निकासका लागि छिट्टै चुनाव होस् भन्ने चाहना भने राखेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
“त्यस्तो होइन । त्यो हो भने पनि गलत छ । भारतले नेपालमा गञ्जागोल चाहेको हो भने बेग्लै कुरा हो । नभए भारतले त्यस्तो खोज्नु त कुनै पनि हिसाबले तार्किक त देखिँदैन । ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा राखेर के स्वार्थ पूरा होला र भारतको ?,” उनको प्रश्नसहितको टिप्पणी छ ।
बरु, राजनीतिक अन्योल, कलहभन्दा ‘आफ्नो खुसी गर’ भनेर भारत चुप बसेको हुन सक्ने उनको आँकलन छ । “जे गर्छौ गर भनेर छोडदिएको जस्तो लाग्छ । यो कलहभन्दा छिटो चुनाव होस् भन्ने भारतको रुचि हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री को होला भनेर पाउने त केही छैन यो महाव्याधिका बेलामा,” उनी भन्छन्, “चुनाव पनि अहिले हुन सक्ने अवस्था छैन । धेरै गञ्जागोल भयो, नहोस् भन्ने होला । ओली रहेर त गञ्जागोल थामिँदैन । एमाले एकजुट भए मात्र गञ्जागोल हट्छ ।”
अब ठूलो दलको हैसियतले एमालेबाटै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । तर, ओलीको विकल्पमा नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
“अहिलेको अवस्थामा सदन जोगाएर निकास खोज्ने हो भने ओली हट्नैपर्छ । ओली स्थायित्वको दुष्मन देखिए । ठूलो पार्टीको हैसियतले एमालेबाटै प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ । बरु, त्यसमा अरु दलको साथ भए हुन्छ,” उनले निष्कर्ष सुनाए ।
विश्लेषक सीकेका नजरमा अहिले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नैतिकता, संसद्को अंकगणितको आधारमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् । कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा नै बस्न जनताले मत दिएकाले अहिले प्रधानमन्त्री बन्न योग्य नभएको उनको ठहर छ । त्यसैले बहुमतप्राप्त दलबाटै ओलीबाहेक प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उनको निचोड छ ।
उनी अब ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री बने एमाले विभाजन हुने, संसद् विघटन हुने, मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिर लैजानेलगायत गञ्जागोल परिस्थति सिर्जना हुने बताउँछन् ।
बुधबार, वैशाख २९, २०७८ मा प्रकाशित
आयोगको निष्कर्ष– पार्टीले कारबाही गरेर निष्कासन गरेको विषय दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न मिल्दैन
निर्वाचन आयोगले भन्यो– जसपाका दुवै पक्षको कारबाही अद्यावधिक हुँदैन
एमाले झगडामा कहाँ छन् वामदेव ?
काठमाडाैं । उद्धार तथा राहतका लागि नेकपा (एमाले) काे विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको टोली मेलम्चीतर्फ प्रस्थान गरेकाे छ । महासचिव ईश्वर... ७ घण्टा पहिले
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले बाढी–पहिरोका पीडितहरुको तत्काल उद्धार र राहतका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । एमाले प्रवक्ता... ८ घण्टा पहिले
काठमाडौं । उपचारका लागि दिल्ली जानु अगाडि नेकपा एमालेका पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीको पछिल्लो अवस्थाले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताएका... ९ घण्टा पहिले
दाङ । नेकपा (एमाले)ले दाङ क्षेत्र नम्बर–३ (क)बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री ओलीलाई आज तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । गएको... ९ घण्टा पहिले
काठमाडौं । नेकपा एमालेका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई थप उपचारका लागि भारत नयाँ दिल्ली लगिएको छ । स्वास्थ्यमा विभिन्न... १० घण्टा पहिले
मेलम्ची । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मेलम्चीको स्थिति असामान्य र असाधारण रहेको बताएका छन् । बुधबार बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणपछि उनले... १० घण्टा पहिले